नभएर के भयो दृष्टि, लाखौँकी पथ प्रदर्शक बनेकी छन् सृष्टि
केशवराज जोशी काठमाडौं, १७ जेठ
सृष्टि केसीका बारेमा सोधखोज गर्नेले उनी के गर्छिन् भन्दा पनि केचाहिँ गर्दिनन् ? भनेर खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । उनी मोटिभेसनल स्पिच दिने गर्छिन् । त्यस्ता प्रेरणादायी भाषण दिएबापत सृष्टि नेपालमा प्रति घण्टा १५ देखि २० हजार रुपैयाँ काउँछिन् भने विदेशमा त्यही काम गरेबापत उनको खातामा २ देखि ३ लाख नेपाली रुपैयाँसम्म आउँछ ।
उनको मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको मोटिभेसनल स्पिचका अतिरिक्त उनी गीत, गजल र कविता लेख्छिन् । अलिअलि गीत गुन्गुनाउँछिन् । नृत्य त यिनको जीवनको अभिन्न अंग नै हो ।
जीवनमा यति धेरैतिर छरिएको मान्छेको पढाइ त के राम्रो होला र ? भन्ने अवधारणा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सृष्टिबारेको तपाईंको धारणा शत प्रतिशत गलत सावित हुनेछ । किनकि उनी अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापमा जति निपूर्ण छन्, त्यत्तिकै सफल छन् पढाइमा पनि ।
वास्तवमा एउटै कुरामा ध्यान दिएर त्यही एउटा कुरामा सफल नहुनेहरू पनि छन् । धेरैतिर छरिने तर कतै पनि राम्रो गर्न नसक्नेहरू पनि भेटिन्छन् । संसारमा त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि भेटिन्छन्, जो धेरैतिर छरिन्छन्, सबैतिर लय भेट्टाउँछन् । सबैतिर सफलता हात पार्छन् । हो तिनै सीमित मान्छेहरूको कोटीमा पर्छिन् सृष्टि पनि ।
कक्षा ७ सम्म अक्सिडेन्टल बोर्डिङ स्कुलमा पढिन् । गठ्ठाघरस्थित सिद्धार्थ विद्यापीठबाट एसएलसी दिएकी सृष्टि विद्यालय तहसम्म औसत विद्यार्थी थिइन् । तर, माथिल्ला तहहरूमा उनको पढाइमा अचम्मको सुधार देखियो ।
डिल्लीबजारस्थित कन्या क्याम्पसबाट आईए र बीएको पढाइ अगाडि बढाएकी सृष्टिले यी दुवै तहमा स्वर्ण पदक हासिल गरी सबैलाई चकित पारिन् । उनी आफ्नो व्याचकी टीयू टपर हुन् ।
आँखाको दृष्टि गुमाएपछि सृष्टिले ब्रेल लिपि सिक्न खोजिन् तर त्यसअघि नै पढिसकेका अक्षरहरू फेरि सुरुबाटै सिक्नुपर्ने भएकाले ब्रेल लिपिको अध्यनमा उनलाई खासै रुचि भएन ।
ब्रेल लिपि पढ्न झ्याउ लागेर आयो वा भनौँ जाँगर चलेन । तर, पढाइ पनि त छाड्नुभएन । यस्तो अवस्थामा उनले एउटा अनौठो तरिका निकालिन्, जुन उनको आफ्नै मौलिक आविष्कार थियो । उनको त्यो चाहनालाई साकार पार्न उनकी बहिनी पर्ने आस्था कार्कीको पनि विशेष सहयोग रह्यो ।
उनीहरूले कागजमा एउटा निशिचत आकृति कोरे, जुन झ्यालको ग्रिलसँग मेल खाने खालका थियो । बीचमा प्वाल पारेर खाली ठाउँ राखिएको थियो । एकअर्कोलाई नछोइने गरी प्वालहरूको बीचमा थोरै दूरी निर्धारण गरिएको थियो ।
उनीहरू त्यही आकृति लिएर फर्निचर पसलमा गए । फर्निचर पसलेले अचम्म मान्दै उनीहरूले भनेबमोजिमको आकृति बनाइदिए । त्यही काठको सानो अकृतिको सहाराले उनी लेख्न थालिन् । त्यही लेखाइले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याइन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाट सम्मानित भइन् । काठको उक्त आकृतिका लागि उनले २० रुपैयाँ तिरेकी थिइन् तर उनका लागि भने त्यो आकृति अमूल्य थियो ।
सृष्टि दृष्टिविहीन हुन् तर उनी जन्मजात दृष्टिविहीन भने होइनन् । १४ वर्षको उमेरमा उनको आँखामा सामान्य एलर्जी भएको थियो । त्यसको उपचारका लागि उनी अस्पताल गइन् । डाक्टरले स्टेरोइड नाम गरेको औषधि दिए । औषधि त दिए तर औषधिको सही प्रयोग विधिबारे जानकारी गराएनन् । न त यसका साइड इफेक्टहरूका बारेमा नै सचेत गराए ।
फलस्वरूप सामान्य समस्या समाधानका लागि अस्पताल पुगेकी उनले डाक्टरको लापरबाहीकै कारण आफ्नो जीवनको सर्वाधिक प्रिय कुरा आँखाको दृष्टि गुमाइन् । तर, उनको हृदयको विशालता हेर्नुहोस्, उनी अहिले न त्यो अस्पतालको नाम बताउन चाहन्छिन्, न त ती डाक्टरको नै, जसको लापर्बाहीले यिनले आफ्नो दृष्टि गुमाएकी थिइन् ।
स्टेरोइड लामो समयसम्म प्रयोग गर्दा त्यसको साइड इफेक्ट हुँदो रहेछ । स्टेरोइडकै कारण उनको आँखामा जलविन्दु भयो र स्टेरोइड प्रयोग गरेको २ वर्षपछि अर्थात् १६ वर्षको उमेरमा उनले आँखाको पूरै दृष्टि गुमाइन् । २ वर्षसम्म धमिलो धमिलो देखिन्थ्यो तर २ वर्षपछि अर्थात् १६ वर्षको उमेरमा पूरै दृष्टि गुमाउन पुगिन् ।
२०४७ सालमा जन्मिएकी सृष्टि अहिले ३० वर्षकी भइन् । उनका कुरा निकै निखारिएका परिपक्व विद्वानका जस्ता हुन्छन् । उनमा अरूलाई कुनै कुरा बुझाउन सक्ने अद्भूत कला छ । साथमा सहनशीलता, धैर्य, बोलीमा मिठास, अभिव्यक्तिमा गहिराइ, सोचमा फराकिलोपना र सपनामा सेवाभाव त छँदै छ ।
अहिले विश्वव्यापी लकडाउनको अवस्थामा पनि यिनको उत्साहमा भने कुनै कमी आएको छैन । ‘ब्लाइन्ड रक्स’ नामक संस्था स्थापना गरेकी सृष्टि सोही संस्थामार्फत् अहिले पनि विभिन्न प्रतियोगिताहरू गराउँदै छन् । अहिलेसम्म गायन प्रतियोगिता र क्वारेन्टाइन नारा (स्लोगान)सम्बन्धी प्रतियोगिता गरिसकेर अब गजल प्रतियोगिताको तयारीमा छन् ।
लकडाउनको समयमा सबै कामहरू अनलाइन, इन्टरनेटबाटै हुँदै छन् । जिन्दगीलाई समाइलो बनाऔँ । आशावादी बनौँ, खुलेर बाचौँ, हाँसो र रमाइलो जीवनका उज्याला पक्ष हुन्, यिनको भरपूर सदुपयोग गरौँ भन्ने मूल आशयले नै यस संस्थाको नाममै ब्लाइण्ड रक्स राखिएको उनी बताउँछिन् ।
अपाङ्गता भएको व्यक्ति भन्नेवित्तिकै उनीहरू दया गर्नुपर्ने प्राणी हुन्, यिनीहरूलाई अरू कसैको आड, भरोसा र स्याहार चाहिन्छ भन्ने औसत बुझाइ छ समाजमा । केही गर्न नसकिए पनि र केही गर्ने चाहना नभए पनि उनीहरूलाई देख्नेवित्तिकै ‘विचरा’ भन्ने किसिमको मानसिकतालाई यस संस्थामार्फत् चुनौती दिन चाहन्छिन् उनी । जीवनका रसमाइला पक्षहरू उजागर गराउन सहयोग पुर्‍याउने संस्थाकोे नामै रक्स, कामै रक्स !
अतिरिक्त क्षमता विकासको काम त छँदै छ, यसका अतिरिक्त विभिन्न किसिमका सीप विकास र सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्ने गरेकी छन् सृष्टिले ।
सृष्टिले विभिन्न माध्यमबाट जुटेको सहयोगलाई सदुपयोग गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शैक्षिक तथा अन्य सहायक सामग्रीहरू वितरणको कार्यसमेत गर्दै आएकी छन् ।
आफैँ कुनै किसिमको शारीरिक समस्यासँग जुधिरहेको अवस्थामा पनि समाज रूपान्तरका लागि केही गर्ने हुटहुटी पालेर बसेकी सृष्टि समाजसेवाको क्षेत्रमा केही गर्न चाहनेहरूका लागि प्रेरणाकी स्रोत बन्न सक्छिन् ।
नृत्यमा युरोपबाट स्नातकोत्तर गरेकी सृष्टि अहिले दृष्टिविहीनहरूलाई नृत्य सिकाउने काम गर्छिन् । सामान्यतया नृत्य हेरिने कुरा हो र यो हेरेर मात्र सिक्न सकिन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । तर, उनी आँखा नदेख्नेहरूलाई पनि नृत्य सिकाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छिन् ।
दृष्टिविहीनहरूलाई नृत्य सिकाउन केही कठिन छ तर सिक्ने र सिकाउने दुवै पक्षले मिहिनेत गर्ने हो भने सिकाउन सकिन्छ भन्ने उनको धारणा छ । उनी दृष्टिविहीनहरूलाई विभिन्न कुरा छुन लगाएर, आवाजको माध्यमबाट र कुनै कुराको व्याख्या गरेर नृत्य सिकाउँदै आएकी छन् ।
सानैदेखि नै उनमा नृत्यको सोख थियो । नृत्यकै कारण उनले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफलसमेत भएकी थिइन् । स्नातकोत्तर तहमा उनले डान्स एन्थ्रोपोलोजी नै पढेकी हुन् । यो विषय उनले नर्वे, फ्रान्स, हँगेरी र बेलायत गरी ४ वटा युरोपेली मुलुकमा गएर पढेकी थिइन् ।
उनलाई घुम्न असाध्यै मनपर्छ । अलिहेसम्म उनी २३ वटा देशहरूमा आफ्नो मोटिभेसनल स्पिचका दौरान पुगिसेकेकी छन् । एक पटकका लागि भए पनि जीवनमा संसारका सबै मुलुकहरू टेक्ने उनको चाहना छ । समाजका सीमान्तकृत वर्गको पक्षमा उठाइएको आवाज त्यसको माध्यम बनोस् भन्ने उनी चाहन्छिन् ।
सृष्टिले आफ्ना केही मोटिभेसनल स्पिचहरू युट्युबमा पनि अपलोड गरेकी छन् । युट्युबमा उनलाई लाखौँले हेर्छन् । ‘प्रत्येकलाई जीवनमा हौसला चाहिन्छ’, सृष्टि भन्छिन्, ‘राम्रो काम गरिरहेकाहरूलाई पनि तिमीले राम्रो गरेका छौ भनिरहनुपर्दछ, जसले उसलाई प्रत्येक पटक रिचार्ज गर्छ र हरेक पटक ताजा बनाउँछ ।’
एक पटक जर्मनीको म्युनिकमा एक जनाले सृष्टिकै कारणले आफ्नो घरमा दम्पत्तीबीच फाटो आउन थालेको अनुभव सुनाए । त्यो कसरी ? जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो ।
कुरा के रहेछ भने ती व्यक्ति श्रीमतीसँग सधैँ सृष्टिको मात्र कुरा गर्दा रहेछन् । सृष्टिको मात्र प्रशंसा गर्दा रहेछन् । आफ्नो श्रीमानले अरूको धेरै प्रशंशा गरेको श्रीमतीलाई मनपर्ने कुरै भएन । ‘कति सृष्टिको मात्र कुरा गरेको ?’ भनेर श्रीमतीले गुनासो गर्न थालिछन् ।
‘तिम्रो कारण मेरी श्रीमती रिसाएर हैरान छु’ भन्दै रमाइलो तरिकाले प्रशंशा गरेका थिए ती व्यक्तिले ।
यसरी भिन्न शैलीमा गरिने प्रशंसाले जोसुकैको मन छुन्छ । त्यसमाथि साहित्यतिर विशेष रुचि रहेकी सृष्टिलाई नछुने त कुरै भएन ।
काम विशेषले देश, विदेश घुमिरहने सृष्टि पाल्पा पुग्दा उनलाई एउटा अचम्मको अनुरोध आयो । त्यो अनुरोध कुनै महिलाको थियो । ती महिला उनको छेउमा आइन् । साथमा ल्याएको रेकर्डर हातमा थमाइन् र केही कुरा रेकर्ड गरेर दिन अनुरोध गरिन् ।
वास्तवमा ती महिलाकी बहिनी क्यान्सरबाट पीडित भएर अस्पतालको शय्यामा थिइन् । सृष्टिको स्पिच भनेपछि हुरुक्कै हुने उनमा हरेस आएका बेला पनि सृष्टिको बोलीले जिजीविषा पलाएर आउँथ्यो रे ! क्यान्सरका बिरामीका लागि उनले आफ्नो सन्देश रेकर्ड गरेर पठाइन् । उनको मन, मस्तिष्कमा भने त्यो घटना कहिल्यै नमेटिनेगरी रेकर्ड भयो । उनीसित यस्ता अनुभवहरू कति छन् कति ।
युट्युबमा अपलोड गरेका उनका सामग्रीहरूले धेरै प्रशंसा बटुृलेका छन् । केही आलोचना पनि हुने गरेको छ । सृष्टि भने आलोचनाबाट कति पनि विचलित हुँदिनन् । उनी आलोचनाहरूलाई पनि त्यतिकै हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गर्छिन्, जसरी प्रशंसालाई आत्मसात गर्छिन् ।
भन्छिन्, ‘कठिनाइ भएन भने अगाडि बढ्नुमा स्वाद आउँदैन ।’
फेरि आलोचनाहरूले अति आत्मविश्वासबाट बचाएर थप नयाँ कु्रा सिक्दै माथि उठ्ने प्रेरणा पनि त दिन्छन् भन्ने लाग्छ उनलाई ।
‘कति राम्रो बोलेको ? यिनीसित म विवाह गर्न चाहन्छु’, सृष्टिको एउटा स्पिचमा यस्तो प्रतिक्रिया पनि आएको थियो । यस किसिमका तल्लो स्तरका प्रतिक्रियाले भने मन खिन्न हुन्छ भन्छिन् उनी ।
बौद्धिक मानिएका व्यक्तिहरूले अपाङ्गतासम्बन्धी गलत शब्द प्रयोग गर्दा पनि नरमाइलो लाग्छ रे उनलाई । ‘सामान्य मान्छेले त्यस्ता शब्द बोल्दा खासै फरक पर्दैन’, सृष्टि भन्छिन्, ‘तर, बौद्धिक भनिएकाहरूले स्टेजबाटै त्यस्ता शब्द प्रयोग गर्दा भने चित्त दुख्छ ।’
त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई होच्याउने गरी चलचित्रहरूमा कुनै संवाद राख्नुलाई पनि उपयुक्त मान्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा केही सीमाहरू र सीमितता त हुने नै भए, त्यसमाथि राज्यले निर्माण गर्ने संरचनाले उनीहरूलाई थप समस्यामा पार्ने गरेको देखिन्छ । हामीले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री हुन नसक्दा त्यसले उनीहरूलाई कदम कदममा अपाङ्गता भएको अनुभूति दिलाइहने उनीहरू बताउँछन् ।
त्यो वर्गलाई वास्तवमा उत्थान गर्ने हो भने हाम्रा संरचना र सोच यी दुवै पक्षमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । सबै भौतिक संरचनाहरू त आपाङ्गमैत्री हुनु नै पर्‍यो साथमा हाम्रो सोचमा समेत परिवर्तन आउन जरुरी छ भन्ने सृष्टिको धारणा छ । त्यस वर्गप्रतिको हाम्रो हेराइ होच्याउने किसिमको होइन, उनीहरूलाई सम्मान गर्ने खालको हुन आवश्यक रहेको बताउँछिन् उनी ।
सोचको दरिद्रता कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पनि देखिने उनको भनाइ छ । उनीहरू आफ्नो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नै तयार नहुने उनी बताउँछिन् ।
‘म एक दृष्टिविहीन हुँ, यो मेरो वास्तविकता हो’, उनी भन्छिन्, ‘मैले मेरो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।’
साङ्ग र अपाङ्ग दुवै पक्षले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा एकअर्काको सहयोगका लागि तयार हुनुपर्ने उनको धारणा छ । एकअर्कालाई शत्रुता र कटुताको भावले हेरेर होइन, एकअर्काको पूरक बन्ने तत्परताले संसारलाई सुन्दर तुल्याउँछ भन्छिन् उनी ।
सृष्टिले जब आँखाको दृष्टि गुमाइन्, त्यसपछि उनी आफ्नो भाग्यलाई सराप्दै आँसु बगाएर बसिनन् । उनले त्यो प्रतिकूल अवस्थाबाट उठ्ने अनेक उपायको खोजी गरिन् । आफूभित्रको सम्भावना पहिचान गरिन् र कठोर मिहिनेत गरेर सपना साकार पार्ने दिशामा निरन्तर कदम चालिरहिन् । आफन्त र साथीहरूको सहयोग उनले हरेक कदममा पाइरहिन् ।
अहिले उनको जीवन राम्रा सम्भावनाहरूको बीचमा उभिएको छ । राम्रो आम्दानी छ । राम्रो चिनजान छ । अवसरहरू उनलाई कुरेर बसेका छन् । तर, उनमा एक्लै उठ्ने चाहना छैन । धेरैलाई आफूसँगै उठाउने सोच छ ।
उनले थालेको सशक्तीकरणको अभियान त्यही दिशामा अग्रसर छ । दृष्टिविहीन सृष्टि आज आफ्नो कलमको माध्यमले, आफ्नो कल्पनाको माध्यमले र आफ्नो आवाजको माध्यमले अपाङ्ग र साङ्ग सबैलाई समान रूपले जीवनको पाठ पढाइरहेकी छन् । जीवन जिउने कला सिकाइरहेकी छन् । सबैलाई समान रूपले बाटो देखाइरहेकी छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १७, २०७७, १८:४२:००
नाट्य क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव : थिएटरको विकल्प खोज्दै रंगकर्मी
जनार्दनसँगै लडेका पिलीका कमाण्डर
‘ब्ल्याक आउट’ गरिएको युवराज वीरेन्द्रको त्यो अन्तर्वार्ता
ऊ बेला प्रधानमन्त्रीले थर्काए, अहिले भारत ठुस्स छ
बोल्नकै लागि जन्मिएका नवराज
जिग्री, पाँडे र मुन्नीकाे लकडाउन डायरी
साना व्यवसायीका दुःख : पुलिसले ठेला खोस्यो, लकडाउनले भात
नेपालका रहस्यमयी केही हत्या काण्ड
दक्षिण कोरियामा फेरि बढे कोरोना संक्रमित, २४ घन्टामा ५० जनामा संक्रमण पुष्टि
कर्णालीमा १ हजार ३२१ जनाले जिते कोरोना, २३४ जना मात्र सक्रिय संक्रमित
बूढानीलकण्ठले विद्यालय बन्द अवधिको शुल्क नलिने